Mmalite nke mmụọ okpukpere chi - AFRIKHEPRI
Mmalite nke mmụọ nsọ
Nke a bụ ihe mere Ndị Kraịst na Europe ji efe ofufe ụmụ agbọghọ amaghị nwoke: Eziokwu mechara kpughee
Rna-egosi n'elu ogidi abua ya, nkehell na lndụ ebighi ebi, okpukpe na-adọta ike ya n'egwu. Ya mere, egwu bu ihe di iche iche n'ememe okpukpebụ kpọmkwem egwu nke amaghi (ọnwụ) nke sitere na mmalite nke mmụọ nsọ. Ma nwoke nke na-atụ egwu abụghị nwoke nwere onwe ya. ọ ndụ na ụgha na aghụghọ na-achọ nchebe zuru oke n'ime okpukpe ma na-enwe olileanya maka ndụ ebighị ebi.
Nkwenye nke Chineke zuru oke na-abịa n'oge nwa ahụ ghọtara na ọ pụghị ịchọta nchebe zuru oke n'ime ndị mụrụ ya. kweere na-adịghị anwụ anwụ mana ọnwụ meriri ha. Mgbe ahụ, nwa site na usoro nchekwa nke oke ya ga-ewepụ echiche ya site na iche echiche. otua ka nna na nne nke nwaturu anwu ghara idi chi na déesse. Ima imara nke nna buru chi ya.
Okpukpe na-abịa site n'ike ya nile nke nwa ahụ echiche efu ma mepụta ihe na-egosi ezigbo nna (ma ọ bụ nne) na onyeIwu bụ ihe atụ maka ikike nne na nna.
Okpukpe na-eme ka ike ha ghara ịtụ egwu. Nke a bụ ihe mere ha jiri nọrọ n'ọgba aghara, ọpụpụ na agha oge niile. N'oge mgbasa ozi okpukpe na mgbanwe, okpukpe na-egbu n'aha Chineke. Ma ndị a na-eso ụzọ ndị Juu, ndị nnọchiteanya nke ozi ọma ahụ bụcha na ọ bụ nanị ndị omempụ na-eleda anya dị ka ndị nsọ. Naanị ha na-emeju ọchịchọ ha maka ịbụ onye ọchịchị.
Okpukpe bụ opium nke ndị mmadụ n'ihi ya ọnọdụ ma na-ekpuchi anyị n'ime usoro ịchọta echiche. Ọ na-enye echiche efu nke iwepụ nhụjuanya dị adị ma si otú a na-eme dịka nyocha nke usoro limbic. TheOkpukpe bụ mkpụrụ echiche. Ka anyị lelee anya ma ghọta ihe site na n 'ọhụụ ọhụrụ ma kwụsị ikwere na eziokwu nke ihe oyiyi ndị a na-emepụta site na prism gị amaghị. Ka anyi jiri mmụọ nnwere onwe biakwute ụwa ma bie ndụ anyị n'ụzọ zuru oke n'ihi na anyị nwere ike ịmara Chineke na ngosipụta nke ịhụnanya ya. Yabụ na anyị hụrụ ibe anyị n'anya n'ihi na nke a bụ naanị otu okpukperechi.
Enweghị nsụhọ na echiche nke ịdị adị